Shirkiga ama caksiga Towxiidka - SomaliNet Forums
Postby ina Warfaa » Sat Dec 25, 2010 2:17 am
Shirkiga ama caksiga Tawxiidka
Layskama ilaalin karo in Allaah loo shariik yeelo in layska ilaaliyo mooyee saddexdan nooc ee Shirkiga:
Midda koowaad: In Allaah loogu Shariik yeelo Rabbinimada waana iyadoo la rumaysto inuu jiro Allaah kale oo wax abuura sida ay rumaysan yihiin Majuusiyiinta, kuwaas oo oranaya Sharka waxa abuura Allaah kale, Shirkiga noocan oo kale ahna Muslimiinta wuu ku yar yahay Eebbaana mahad leh, inkastoo uu u dhow yahay hadalka ay yiraahdaan Muctazilada ee ah:
Sharku waa uun waxa uu dadku sameeyo.
Midda labaad: In Allaah loogu Shariik yeelo Ilaahnimada ama addoon loo ahaanshaha waana in Allaah lala caabudo Ambiyada iyo Saalixiinta sida in la gargaar weydiisto oo loo dhawaaqo marka la dhibban yahay i.w.m.. Nasiib xumose Shirkiga noocan oo kale Muslimiinta waa uu ku badan yahay, waxaana qaadaya dembiga intiisa badan Shuyuukhda taageersan shirkiga noocan oo kale iyagoo ku magacaabaya Tawassul yacni Ugu dhawaansho “waxayna ugu yeerayaan magac aan ahayn kiisa“!.
Midda saddexaad: In Allaah loogu shariik yeelo Sifaadka ama Tilmaamaha waana in lagu sifeeyo qaar ka mid ah wuxuu Allaah abuuray qaar ka mid ah tilmaamayaalkii Allaah gaarka u ahaa tusaale ahaan in la og yahay Qaybka yacni waxa qarsoon, shirkiga noocan oo kale ahna wuxuu ku badan yahay Suufiyada iyo kuwii raacay raadkooda sida qaar iyaga ka mid ah ay ku amaanaan Nebiga amaanta Allaah iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee:
“Wa min culuumika cilmul-Lawx wal-Qalam”! yacni “waxaa ka mid ah Culuuntaada Cilmiga Looxa iyo Qalamka!”
Halkan ayayna ka timid baadida qaar ka mid ah Dajjaaliinta yacni Beenlowyaasha kuwaasoo sheegta inay arkaan Rasuulka amaanta Allaah iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee maanta iyagoo soo jeeda, waxayna weydiiyaan wixii ka qarsoomay oo Qayb ah.
Rasuulkii Allaahna amaanta Allaah iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee ma ogaan jirin Qaybka markuu noolaa: (Haddaan ogaan lahaa Qaybka waxaan badsan lahaa wanaagga xumaanna ma arkeen) siduuse ku ogaanayaa markuu dhintay ka dib?!.
Sidaas darteed qofkii ka ilaaliya Tawxiidka Allaah saddexdaas nooc ee shirki wuxuu Allaah u keli yeelay Rabbinimadiisii, Cibaadidiisii iyo Sifaadkiisii.
Qofkiise Tawxiidka sidaas u sugin, Allaah wuxuu ku yiri:
Haddaad Allaah u shariik yeeshid waxaa buraaya camalkaaga waxaadna ka mid noqonaysaa kuwii khasaaray.
Waxaana maqaalkan ka turjumay kitaabka la yiraahdo al-Caqiida ad-Daxaawiya oo uu sharxay al-Muxaddis al-Faqiih Maxamed Naasirud-Diin al-Albaani –Eebbe ha u naxariistee-